Sawudi Arabhiya - ALinks
Amanqaku eSaudi Arabia
Ungawufumana njani umsebenzi eSaudi Arabia? Isikhokelo esikhawulezayo sabasemzini kunye nabahlali baseSaudi
January 9, 2022 UKaruna Chandna imisebenzi, ISaudi Arabia
Abafundi base-UK bakhangela umsebenzi eSaudi Arabia. Kuba ungafumana imisebenzi apha kumzi-mveliso weoyile. Kunye nemisebenzi kwiindawo ezinjengemfundo, ukufundisa, kunye ne-IT. Ukugxila okukhulayo kukukhulisa uqoqosho. Ukunciphisa i
January 8, 2022 IShubham Sharma ISaudi Arabia, ivisa
ISaudi Arabia yinxalenye yamazwe aseArabhu. Ikwabizwa ngokuba liLizwe lama-Arabhu. La ngamazwe aneArabhu njengolwimi lwabo olusemthethweni. I-Saudi Arabia yindawo efanelekileyo yokutyelela emhlabeni. Ke,
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko e-Saudi Arabia
Oktobha 8, 2021 UMaitri Jha ababaleki, ISaudi Arabia
ISaudi Arabia ayinayo imigaqo-nkqubo ebanzi yokufuduka nokuba. Kodwa kukho umgaqo we-Iqama. Isebenza njengoluhlu lwemithetho malunga nenqanaba kunye namalungelo abafuduki bangaphandle elizweni. Kuya kufuneka ayifumane
Isikhokelo sohlahlo-lwabiwo mali sohambo oluya eSaudi Arabia
Februwari 4, 2020 IShubham Sharma ISaudi Arabia, hamba
I-Saudi Arabia yaziwa ngokusemthethweni njenge-Kingdom of Saudi Arabia lilizwe elikhoyo eMbindi Mpuma. I-Saudi Arabia ithatha inxaxheba ikakhulu kwimveliso yeoyile yehlabathi. Kude kube ngo-2013, ekuphela kwendlela yokundwendwela i-Saudi Arabia kungokusebenzisa i-visa yeShishini kuphela
Best Indlela yokuhamba Of e Saudi Arabia
Februwari 2, 2020 IShubham Sharma yibakhona, ISaudi Arabia, hamba
Kukho ixesha apho ukuthuthwa eSaudi Arabia kwakungekho phantse kuyo yonke indawo. Ubukumkani base-Saudi Arabia bujamelane nobunzima obuninzi malunga nokuhamba. Kwasekuqaleni kwe-1900, iSaudi ayinalo naluphi na uhlobo olulungileyo lokuhamba ngaphandle kweendlela. Kodwa emva
Ezona Yunivesithi ziBalaseleyo kwiBukumkani baseSaudi Arabia.
January 31, 2020 IShubham Sharma ISaudi Arabia, isifundo
Ubukumkani base-Saudi Arabia lelinye lamazwe akhula ngesantya esiphezulu ngokwemfundo esemgangathweni kuMbindi Mpuma. ISaudi Arabia ngoku inamaziko akumgangatho wehlabathi. Isizwe sinika imfundo ekumgangatho wehlabathi phantse kuyo yonke imisinga yemfundo. ESaudi
Iindawo Best To Visit In Saudi Arabia
January 30, 2020 UKaruna Chandna ISaudi Arabia, hamba
I-Saudi Arabia yindawo yemisikiti njengoko uninzi lwabemi belizwe bengamaSilamsi. Ngaphandle kwalonto, zininzi nezinye iindawo esinokundwendwela ebukumkanini. Kukho ixesha apho kungekho phawu
Le Hotels Best Noluyolo e Saudi Arabia
January 23, 2020 UKaruna Chandna iihotele, ISaudi Arabia, hamba
Ubukumkani baseSaudi Arabia lilizwe elikhulu, abunako ukunqongophala kokugcwele kweehotele ezintle. Iihotele eSaudi Arabia ziphefumlelwe kakhulu kuyilo lwale mihla kunye nokuthinta ilifa lalo. KwiJedda kunye